कसरी वजन राम्रो खान? उमेर-पुराना समस्या, लिङ्ग र उमेर मतभेद स्वतन्त्र! बस मुर्ख, र, वजन गर्न निश्चित हुन - Nutritionists कुरा भनेर आफैलाई भोकभोकै पर्छन् भन्न उछिन्ने। बस उत्पादनहरु ध्यान चयन र तयारी को विधि ध्यान गर्न आवश्यक छ। विशेष, यो उसिनेर विचार लायक छ ब्रोकोली। क्यालोरी सामग्री बन्दागोभी को जो ब्रोकोली एक स्वस्थ व्यक्तिको आहार को नियमित सहभागी बनाउँछ, धेरै सानो छ। के यो थप उपयोगी बनाउँछ?
ओह, खाने यो आनन्द!
जीवन किन छिटो खाना को एक मिठाई दाँत र प्रशंसक त क्रूर छ?! यो केक को एक टुक्रा लागि, हामी पक्षले मूल्य तिर्ने बोसो संग छन् त्यो सत्य हो? सोडा को बोतल एक जटिल तीन-पाठ्यक्रम भोजन गर्न gastritis र अल्सर प्रगतिशील र प्रिय ह्यामबर्गर ताप बराबर मा को bouts दिइएको? यो एक कतै गर्न सडक छ - म nutritionists साधारण सत्य लुकाउन कि छैन, र नियमित आहार कि विरामीहरु सम्झाउने भन्न पर्छ। पहिलो, तपाईं साँच्चै वजन, इच्छित आकार प्राप्त र चिन्तित देखिन्छ नोटिस। तर एक आहार - यो फेरि र फेरि प्रयास गर्नुहोस् धीरज लागि आफ्नो शरीर जाँच गर्न चाहनुहुन्छ कि दबाइ एक प्रकारको छ। रिसले एक शरीर स्टोर र, तिनीहरूलाई भन्न "धन्यवाद।" फलस्वरूप, यो मासु deprivation गर्न समायोजन र पनि तिनीहरूलाई बोसो रिजर्व Replenish गर्न सिक्न आवश्यक छ। त्यसपछि, आहार अप कस हुनेछ, र सबै थप anorexia तिर सार्न। यो तपाईं आवश्यक छ?
एक स्वस्थ मन लागि!
स्वस्थ भोजन - एउटा असल आंकडा र सुखद अनुहारको रुप रंग को लागि एक नुस्खा छ। विशेष गरी स्वादिष्ट विशेषताहरु बलिदान छैन रूपमा। बस आफ्नो आहार कम क्यालोरी खाद्य पदार्थ र हार्दिक भर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, सेवा ब्रोकोली उसिनेर सेवा गर्नेछन्। यो प्रति 100 ग्राम मात्र 33 किलो कैलोरी पुग्छ क्यालोरी। तुलना लागि, यो फिलर बिना चकलेट 16 पटक थप "वजन" बताए हुनुपर्छ। यो गर्मी उपचार एकदम तरकारी को उपयोगिता कम भनेर विश्वास छ, तर यो सिद्धान्त सबै समूहहरूको लागि साँचो छैन। विशेष, यो बन्दागोभी को राज्य उपचार अघि थियो खातामा लिन आवश्यक छ। यसरी, ताप उम्लिरहेको अलिकति उच्च पछि सुकेको काउली - 35 किलो कैलोरी र स्थिर - कम - मात्र 28 किलो कैलोरी। सिद्धान्त मा, तथ्याङ्कले धेरै परिवर्तन छैन, तर सबैभन्दा गम्भीर फरक भएको सुकेको बन्दागोभी मा भिटामिन सी को मात्रा यो यति धेरै छ।
अन्य तरकारी बीचमा
तरकारी मा एक उपवास दिन व्यवस्था र उबला ब्रोकोली को आधार हुनेछ मा गरौं गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। दिन को क्यालोरी बलियो किलो कैलोरी छैन हुनेछ, तर हामी 1200 परे जान हुनेछ। आहार को आधार तरकारी हो कि दिइएको, यो कार्य सरल र सम्भाव्य छ। नास्ता लागि एक पौष्टिक ताजा बनाउन ब्रोकोली गर्न सक्नुहुन्छ, अजवाइन र ककडी। उहाँले चाँडै तिर्खा र energizes quenches। यस्तो कफी पेय अनावश्यक छ, र हृदय ताजा एक बिट प्रभावित छैन पछि, मलाई विश्वास गर्छन्। wholemeal रोटी, Mashed उसिनेर ब्रोकोली र ककडी को पेय सैंडविच तयार। बन्दागोभी संग तरकारी सूप - खाजाका लागि। खाने, सलाद लागि, सोया सस र तरकारी तेल स्वादिष्ट। दिन को आहार तरकारी पूर्ण-bodied र स्वादिष्ट हुन सक्छ तर क्यालोरी उसिनेर ब्रोकोली सजिलो बनाउँछ। सबै दिन कुनै भोक र तराजू को परिणाम मा कम राम्रो।
लाभ र स्वाद
त्यसैले, खुलस्त, उबला ब्रोकोली एक कम ताप मूल्य र यसैले तथ्याङ्कले गर्दैनन् एउटा खतरा छ। को बन्दागोभी कोमल र बहुमुखी स्वाद, तर किनभने ब्रोकोली मासु, माछा र offal को व्यञ्जन ठूलो पक्ष पकवान छ। भिटामिन सी, पीपी, K प्रभावशाली मा बन्दागोभी अमूल्य लाभ र richness। पूरै ब्रोकोली एस्कोर्बिकएसिड। सिट्रस फल को यो अगाडि राख्दै।
हामी ब्रोकोली संग उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा सान्दर्भिक तरिका विचार गर्नुहोस्। ताप उसिनेर बन्दागोभी 25-35 किलो कैलोरी को दायरामा, सानो छ। यो कम क्यालोरी उपचार विकल्प छ, तर यो विभिन्न तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो पूरै उपयोगी संरचना र जीवन्त रंग संरक्षण गर्न एक जोडी को लागि खाना पकाउनु उचित छ। को बन्दागोभी को प्रारम्भिक राज्य कुरा छैन; तपाईं, ताजा स्थिर वा सुकेको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, अन्त उसिनेर बन्दागोभी मा ताजा भन्दा कम क्यालोरी छ।
बालिका अक्सर अग्रिम आफ्नो आहार मार्फत लाग्छ, र बन्दागोभी 100 ग्राम प्रोटिन को3ग्राम गर्न, छ, शरीर को 300 ग्राम को एक भाग शुद्ध प्राकृतिक प्रोटीन को 10 ग्राम दिनेछु छ भनेर याद गर्नुहोस्। यो रकम परिवर्तन गर्दैन, पनि उसिनेर ब्रोकोली भने। 100 ग्राम र यति को गरमी सामाग्री एकदम कम छ, तर प्रोटीन को प्रयोग पनि छ। खैर, प्रोटीन satiety प्रदान गर्न, र यसैले एक पूर्णतामा को खानाको पछि भावना लामो, तर रमाइलो heaviness बिना हुनेछ।
यो पनि यो आवश्यक छैन मसला बिना बन्दागोभी खानु छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। नुन भन्दा 5-6 किलो कैलोरी र स्वाद संग क्यालोरी उसिनेर ब्रोकोली आधुनिक मानिस लागि धेरै सुखद बन्नेछ। तपाईं grated लसुन, मरिच र जीरा संग बन्दागोभी मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ स्पाइस गर्न। को संरचना मा बिटा-carotene को राम्रो पाचन लागि, यो बन्दागोभी वनस्पति तेल थप्न मनमोहक छ। पकाउने मा, विभिन्न देशहरूको ब्रोकोली प्रकाश सूप र तरकारी सलाद तयार गरिन्छ। माछा सही अनुरूप बन्दागोभी को नाजुक स्वाद र मौका द्वारा पनीर सस संग ब्रोकोली संग विश्व भोजन सामन को एक क्लासिक हुन्छन्। यो Gourmets र स्वस्थ खाना प्रेमीहरूलाई लागि स्वादिष्ट र स्वस्थ पकवान छ।
पोलेको ब्रोकोली पनि प्रति 100 ग्राम मात्र 46 क्यालोरी छ रूपमा, बढ्दै पातलो मानिसको आहार मा उपस्थित हुन अधिकार छ। यो टमाटर र खीरे संग राम्रो तरिकाले जान्छ, र यसैले राम्रो पक्ष पकवान हुन सक्छ। ब्रोकोली धमाकेदार स्वाद पनीर र कागति zest मेल खान्छ। यो पकवान सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट लायकको!
क्रीम-प्रोजेक्ट क्या हो? यसले के गर्छ र यसलाई कसरी लागू गर्दछ?
स्टार्चको मोनो क्याम्प हो?
"बाल्टिक बैंक": को "केन्द्रीय बैंक" समस्या (2014)
कसरी वाकवाकी छुटकारा प्राप्त गर्न: व्यावहारिक सल्लाह
यसलाई स्थापित गरिएको छ जो मैगलन गरेको यात्रा उपस्थितिको फलस्वरूप? फर्डिनान्ड मैगलन को यात्रा